Waxbarashada | Somaliska - Part 2
Shalay oo taariikhdu ay ahayd 2015-10-24 waxa si toos ah uga bilaabmay dalka Sweden qaadista imtixaanka ee diyaargarowga tacliinta heerka jaamacadeed ee loo yaqaano (Högskoleprov). Imtixaankan oo sanad walba laba jeer la galo ayaa...
8 ka mid ah jaamacadaha Sweden ayaa kaalin ka galay liiska jaamacadaha ugu wanaagsan aduunka oo sanadkasta ay samayso shirkada QS World University Ranking. Jaamacada Lund ayaa noqotay jaamacada ugu wanaagsan Sweden iyadoo kaalinta...
Xanaanada lagu magacaabo Bilaal ee ku taala magaalada Gävle ayaa lagu haystaa sababta ay caruurta ugu dhigeen diinta Islaamka. Sida ay qortay idaacada Sweden waaxda waxbarashada ee magaalada Gävle ayaa baaritaan ku samaysay shaqada...
Dowlada cusub ee Sweden ayaa shalay soo bandhigtay qorshooda ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada ee iskuulada ay liidato natiijada imtixaamada. Dowlada ayaa sanadka soo socda keliya ku bixin doonta lacag...
Kamuunka Göteborg ayaa go’aan ku gaaray in dadka cayrta qaata loo ogolaado in ay waxbartaan. Go’aankaan oo ah midkii ugu horeeyay ee kamuun ka tirsan Sweden uu gaaro ayaa fursad u siinaya dadka shaqo...
Degmooyinka Sweden ayaa cabasho ka muujiyay macalin la’aanta luuqada Af-Soomaaliga. Caruurta Soomaalida ayaa xaq u leh in la baro luuqadooda hooyo taasoo ah masuuliyad ka saarantahay degmooyinka sweden balse macalimiin Soomaali ah ayaan lahayn...
Gudoomiyaha xisbiga Socialdemokraterna (S) Stefan Löfven ayaa sheegay in uu doonayo in hay’ada CSN ay dhalinyarada siiyo lacag dayn ah si ay u qaataan laysanka baabuurka (Körkort). Xisbiga Miljöpartiet ayaa dhaliilay qorshaha deynta, iyagoo ku taliyay in...
Iyadoo isbuucaan la soo xiray iskuulada Sweden ayaa daafaha wadanka waxaa lagu qabtay xaflado lagu maamuusayo ardayda dhamaysatay dugsiyada sare (Gymnasium). Dhalinyaro badan oo Soomaalida ayaa ka mid ahayd ardada ka qalinjabisay dugsiyada sare sanadkaan. Magaalooyinka...
Hay’ada Sharciyada Wadooyinka (Trafikverket) ayaa shaacisay in ka bilaabata 16 bisha Juun lagu dari doono Af-Soomaaliga luuqadaha lagu gali karo imtixaanka Laysanka baabuurta (kunskapsprovet – B). Arintaan ayaa ah mid Soomaalida ku nool Sweden...
In mudo ah ardada doonaysa in ay dhigato SFI waxay xaq u leeyihiin in ay doortaan iskuulka ay dhiganayaan. Taasoo ardada siinaysa fursada in ay doortaan iskuulka ay ka heli karaan waxbarashada ugu fiican....
Horumarka ay ardadu ka gaaraan waxbarashada iskuulada Sweden waxaa qeyb weyn ka qaata waalidiinta, oo caruurtooda ka caawiya casharada iyo la socodka iskuulka. Doorka waalidiinta ayaa ah mid si weyn uga duwan kii Somalia....
Gabar macalinimo ka barata jaamacada Malmö oo tababar u joogtay iskuulka ku yaala gobolka magaalada ayaa lagu amray in ay fasalka ka baxdo maadaama ardadu ay ka sheekeysanayaan filim ka hadlaya dadka “madoow”. Macalinka ka masuulka...